Dukaamada cuntada oo caqabad kala kulmay lacagaha cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dukaamada cuntada oo caqabad kala kulmay lacagaha cusub
La daabacay onsdag 7 oktober 2015 kl 16.12
Hal toddobaad kadib markii ay suuqa soo gashay lacagta cusub ee uu soo saaray bangiga Iswiidhan, waxa ay dukaamo badani kala kulmaan caqabad xaqa safirka ah.
Claes Salomonsson oo ah afhayeenka shirkadda Axfood, oo ah shirkad la shaqaysa 800 oo dukaan oo ay leedahay shirkadda Willy's iyo waliba dukaamada cuntada ee Hemköp ayaa sheegay in ilaa 140 dukaan oo ay leedahay shirkadda Willy's iyo 20 ay leedahay shirkadda Hemköp ay la kulmeen dhibaato xagga safirka ah. Claes intaas waxa uu ku daray in lacagtii mishiinada ku jirtay ee safarka loogu talogalay ay ku jirtay uun waraaqaha 20 karoon ahi, halkii ay ka ahayd in ay ku jiraan warqadaha 50 karoon ahi.
Dhammaan dukaamada dhibaatadan la kulmay ayaa ah kuwo wada isticmaalo mishiino isku si u shaqeeya oo la yidhaa Cashguard-system.
Shirkadda Strongpoint oo ah shirkadda ka masuulka ah hannaankan ay lacagtu ku shaqayso ee Cashguard-system ayaa laba sanno qorshaynaysay sidii arrintan xal loogu heli lahaa. Madaxa shirkaddaaasi Jörden Waaler ayaa sheegay in ay ahayd hawl adag. Inkasta oo shirkaddiisu qaadanayso masuuliyadda arrintan, haddana waxa uu Waaler sheegay in bangiga Iswiidhan yahay ka dhibtani abuuray. Maaddaama oo uu bangigu laba jeer sheegay wax kala duwan. Ugu danbayntiii waxa uu Waaler sheegay in ay xal wanaagsan u heli doonaan arrintan.
Dhanka kale dukaamada ICA iyo COOP ayaa Iyana soo gudbiyay cabasho la xidhiidha xagga safirka mishiinka lacagta. Si arrintaasi xal loogu helana waxa uu sheegay Claes Solomonsson oo ah afhayeenka shirkadda Axfood in xalku yahay in macmiisha laga codsado in ay kaadh wax ku iibsadaan.